Vaovao - Ampidiro ny lamba PP mitsonika lamba lamba notsofina
Ampidiro ny lamba PP mitsonika lamba notsofina
Ny lamba mitsoka mitsonika (lamba mitsonika notifirina tsy vita amin'ny lamba) dia vokatra vita amin'ny lamba firakotra PP (polypropylene) avo lenta tsy voatenona. Io no akora fototr'ilay sarontava. Ny savaivon'ny fibre spinneret dia mety hahatratra 0,001 ka hatramin'ny 0,055 mm. Betsaka ny banga, firafitra malefaka, fanoherana ketrona tsara, ary firafitra capillary tokana. Ny fibre Ultrafine dia mampitombo ny isan'ny sy ny velaran'ny kofehy isaky ny faritra iray, ka ny lamba mihosin-dronono dia manana fanivanana tsara, miaro, insulasi hafanana ary mandray ny solika. . Ny fampiasana lehibe indrindra dia ny filtration ny rivotra, ny fanivanana ranoka mandoto asidra, ny fanadiovana ny fahadiovan'ny sakafo, ny famokarana saron-tava vovoka indostrialy, sns. Ankoatr'izay, azo ampiasaina ho vokatra ara-pahasalamana sy ara-pahadiovana, hamafana ny indostrialy, fitaovana fanamainana hafanana, solika- fitaovana manintona, mpanasaraka bateria ary lamba vita amin'ny hoditra sandoka. ary maro hafa. Hatramin'ny nielezan'ny valan'aretina pesta vaovao dia nanontany ny orinasan-tserasera ny kaomisiona misahana ny fanaraha-maso sy ny fitantanan-draharaham-panjakana ao amin'ny filankevi-panjakana mba hanafaingana ny fanamboarana ny làlam-pamokarana, hametraka haingana araka izay azo atao, ary hanitatra ny famatsiana ireo tenona tsy levona eny an-tsena hanome fiarovana amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso ny valanaretina.
Fampiharana mahazatra amin'ny lamba tsy voatenona meltblown:
1. Fampiharana eo amin'ny sehatry ny fanadiovana ny rivotra: ampiasaina amin'ny fanadiovan-drivotra, ho toy ny singa sivana rivotra avo lenta, ary ampiasaina amin'ny fanasivanana rivotra malemy sy salantsalany miaraka amin'ny taha ambony kokoa. Izy io dia manana tombony amin'ny fanoherana ambany, tanjaka avo, asidra tsara sy fanoherana alkali, fanoherana ny harafesina, fahombiazan'ny faharetana, androm-piainana lava, ary vidiny ambany.
3. Fitaovana sivana ranon-javatra sy diaphragm bateria: lamba mitsoka polypropylene atsofoka no ampiasaina hanivanana ny ranoka asidra sy alkaly, solika, sns. Tena tsara ny fahombiazany, noheverina ho fitaovana diaphragm tsara avy amin'ny indostrian'ny bateria ao an-trano sy any ivelany, ary efa be mpampiasa, Tsy mampihena ny vidin'ny bateria fotsiny, manamora ny fizotrany ary mampihena be ny lanjan'ny bateria.
4. Fitaovana mpitroka solika sy soloina indostrialy: ireo fitaovana mpitroka solika isan-karazany vita amin'ny lamba polytylène meltblown, izay afaka mandray menaka hatramin'ny 14-15 heny ny lanjany, dia be mpampiasa amin'ny tetik'asa fiarovana ny tontolo iainana sy ireo tetikasa fisarahana amin'ny rano-menaka. Ankoatr'izay dia ampiasaina amin'ny famokarana indostrialy izy ireo. , Azo ampiasaina ho fitaovana madio ho an'ny solika sy vovoka. Ireo rindranasa ireo dia manome filalaovana feno ny toetran'ny polypropylene tenany sy ny fiovan'ny fibre ultrafine vita amin'ny meltblown.
5. Fitaovana fanamafisam-peo mafana: Ny savaivon'ny kofehin'ny menaka manjelanjelatra dia eo anelanelan'ny 0,5-5μm, ary izy ireo dia natao ho lamba tsy voatenona amin'ny alàlan'ny fametrahana an-tsokosoko. Noho izany, ny velarantany manokana misy ny kofehy meltblown dia lehibe ary avo ny porosity. Rivotra be dia be no voatahiry ao amin'ity rafitra ity. , Afaka misoroka tsara ny fahaverezan'ny hafanana, fitaovana fanivanana sy insulation tsara. Ampiasaina betsaka amin'ny famokarana fitafiana sy fitaovana fanamainana hafanana isan-karazany. Toy ny palitao hoditra, lobaka ski, akanjo tsy misy hatsiaka, lamba landihazo, sns., Manana tombony amin'ny lanja maivana, hafanana, tsy misy fitrohana ny hamandoana, azo idiran-drivotra tsara, ary tsy misy ahitra.